Qalculate: Anwendung yekushandisa yakakwana Calculator pane desktop yako | Linux Vakapindwa muropa
Zvingave izvo kuti maapp default Calculator izvo zvinouya nenzvimbo dzinozivikanwa kwazvo dzedesktop, senge GNOME uye KDE Plasma, hazvina kukwana kwauri, kunyangwe chiri chokwadi kuti maapplication aya nekusarudzika ane akati wandei modes senge yepamusoro, yesainzi, programmer, nezvimwe. kupa makanda akasiyana kana graphical maficha eapp neakawanda kana mashoma mashandiro zvichienderana nezvido zvako uye izvo musimboti zvinofanirwa kukwana kune vazhinji vashandisi.
Kunyangwe iwe usingagutsikane neaya maapplication kana kana iwe uchitsvaga chimwe chakati siyanei kana imwe nzira, nhasi tiri kuzokupa iwe Calculator app inonzi Qalculate uye kuti ungafarire. Ehezve, chirongwa ichi chemahara uye chemahara senge mazhinji mapurojekiti uye software yatino tsanangura muLxA. Uye zvakare, yakasimba uye yakajairika-chinangwa chekugutsa ruzhinji rwevashandisi zvichienderana nehunyanzvi hweumwe neumwe wavo.
Zviri chaizvo yakapusa kushandisa, ine intuitive graphical interface uye inokwanisa kuve yakaoma uye ichiita mushe. Inogona kushanda neakawanda emasvomhu mashandiro uye chengetedza nhoroondo yezvese mashandiro atinoita mairi. Kana iwe uchida kuiisa, ingoshandisa yako yaunofarira package package uye tora zita rayo pamwe neyakakodzera sarudzo, nekuti inowanikwa mune mazhinji esoftware repositori eakanyanya madistros. Kana iwe unogona kuwana kurodha pasi uye Rumwe ruzivo pane peji rewebhu.
Asi ini ndichakuudza, izvo pakati pakesehunhu Izvo iwe zvauchazowana ndezvekuti zvinoshanda pamapuratifomu akati wandei seWindows uye Mac, kuwedzera kune GNU / Linux, iri yemahara uye yemahara, sosi yayo yakavhurika inowanikwa kuvaka kana kugadzira forogo, ine bhuku rinonzwisisika online, iyo inokutendera iwe kugadzirisa ayo mashandiro (chimwe chinhu chakanyatsobatika), uye ine yazvino, minimalist, uye inogadziriswa GUI.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » Qalculate: Anwendung yekushandisa yakakwana Calculator pane desktop yako